သူမရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအခန်းထဲ ၀င်ပြီးဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျကာပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Cele Top Stars
သူမရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအခန်းထဲ ၀င်ပြီးဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေကျကာပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
November 21, 2021 By admin2Knowledge
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်လေးတွေနဲ့ မိဘရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း နွေးထွေးစွာထွေးပွေ့ပေးထားသူ တစ်ယောက်ပါ… ။
ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ရင်သွေးလေးများဂေဟာကတော့ ချစ်စရာသားသားမီးမီးလေးတွေရှိလို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေရဲ့ ဝေယျာဝစ္စ တွေပါမက ကျန်းမာရေး ကိစ္စတွေကိုလည်း သူကိုယ် သေသေချာချာ ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေးနေတာကလည်း တကယ်လေးစားစရာပါပဲ…. ။
ကလေးတွေ ကလည်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိကြလို့ ခိုင်နှင်းဝေ ကပီတိဖြစ်နေရတာပါ ။ အခုလည်း ဝန်ထမ်း အခန်းထဲ ဝင်မွှေနှောက်ကာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သဘောတွေကျကာ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှလာပါတယ် ။ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကြောင့် ပြနါလည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. ။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရဟိတအလုပျတှကေို စှမျးစှမျးတမံ လုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။ရငျခှငျပိုကျအရှယျလေးတှနေဲ့ မိဘရဲ့စှနျ့ပဈခွငျးကိုခံလိုကျရတဲ့ ကလေးတှကေိုလညျး နှေးထှေးစှာထှေးပှပေ့ေးထားသူ တဈယောကျပါ… ။
ခိုငျနှငျးဝေ ရဲ့ ရငျသှေးလေးမြားဂဟောကတော့ ခဈြစရာသားသားမီးမီးလေးတှရှေိလို့ ပြျောရှငျခမျြးမွစေ့ရာကောငျးလှပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကလေးတှရေဲ့ ဝယြောဝစ်စ တှပေါမက ကနျြးမာရေး ကိစ်စတှကေိုလညျး သူကိုယျ သသေခြောခြာ ဂရုတစိုကျနဲ့ ပွုစု စောငျ့ရှောကျပေးနတောကလညျး တကယျလေးစားစရာပါပဲ…. ။
ကလေးတှေ ကလညျးတဈယောကျကိုတဈယောကျ ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ခဈြခဈြခငျခငျ ရှိကွလို့ ခိုငျနှငျးဝေ ကပီတိဖွဈနရေတာပါ ။ အခုလညျး ဝနျထမျး အခနျးထဲ ဝငျမှနှေောကျကာ ဆော့ကစားနတေဲ့ ကလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး သဘောတှကေကြာ ပုံရိပျလေးတှကေို ဝမြှေလာပါတယျ ။ ပုံလေးတှေ ကွညျ့ပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ ပွနါလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…. ။
အရင်ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူပဲ မြန်မာဆန်ဆန်နဲ့လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပုံတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်